Shir u dhaxeeya Hirshabelle iyo Dowlad Deegaanka Soomaalida oo la isku mari la'yahay | Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Shir u dhaxeeya Hirshabelle iyo Dowlad Deegaanka Soomaalida oo la isku mari la’yahay
Shir u dhaxeeya Hirshabelle iyo Dowlad Deegaanka Soomaalida oo la isku mari la’yahay
Ismari-waa ayaa ka taagan shirkii u dhaxeeyay Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan iyo Guddoomiyaha gobolka Shabeelle Aadan Axmed Sooyaan oo ka socda degmada Feer-feer qeybta Dowlad deegaanka Soomaalida.
Labada guddoomiye ee Hiiraan iyo Shabeelle ayaa qeyb ka ahaa wafuud aay kala hoggaaminayeen Madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed) iyo hoggaanka amniga DDS oo shalay gaaray Feer-feer.
Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa ku warramaya ismari-waaga shirka uu yimid kaddib markii leysku afgaran waayay ajandaha shirka.
Guddoomiyaha gobolka Shabeelle Aadan Axmed Sooyaan ayaa shirka la yimid qodobo aan Guddoomiye Jeyte u cuntamin sida in la kala saxiixdo Heshiis amniga oo uu ku li faaqanyahay qodob sheegaya in la sameeyo dhul ka caagan tacbashada beeraha, deegaanka, iyo in hub lagu qaato intaba dhulkaas oo ku yaalo gudaha gobolka Hiiraan.
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa laalay qodobkaasi madama uu sheegay in uusan dhul Soomaaliya leedahay taako kamid ah uusan bixin karin, waxuuna marka hore ka dal baday madaxda DDS in aay ku wareejiyaan Labo ruux oo isugu jira Askari CXD ka tirsan iyo qof shacab ah oo la sheegay in muddo labo bil ah afduub loogu heestay dhanka dowlad deegaanka Soomaalida, balse hadda saraakiisha amniga DDS gacanta ugu jira.
Sidoo kale Guddoomiye Jeyte ayaa dalbaday in la qabto shirweyne Dib-u-Heshiis ah oo colaada beelo walaala ah ee wada dega Feer u dhaxeeysa lagu dhammeeynayo sidaana looga maarmo qodobka in dhul Hubka Deegaanka iyo Tacbashada ka caagan la kala saxiixdo.
Madaxda DDS ka socda ayaa u muuqda kuwo ku gor-gortamaya wareejinta dadka Afduubka loo heestay, waxeeyna madaxda Hirshabelle hor dhigeen qodobo aad u adag taasi oo keentay in shirka uu isaga baxo Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan.
Shirka ayaa wajigii koobaad markii leeysku mari waayay waxaa intaasi kaddib la saaray guddi hoosaadyo, kuwaasi oo hadda shirar gaar gaar ah leh waxaana lagu ballamay in mar kale berri shirka dib loo amba qaado si qodobada maanta leysku mari layahay xal loogu helo.
29-jun 2020 ayeey aheed markii uu fashilmay shir nuucaan oo kale ah oo madaxda DDS ku doonayeen in guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan uga saxiixaan Heshiis dhigaya in la kala saxiixdo dhul dhan 13-KM oo ka caagan Deegaan Beerasho iyo in hub lagu dhax qaato, hase ahaatee guddoomiye Cali Jeyte ayaa Heshiiskaasi si cad u diiday waxaana la xasuustaa in xittaa xaaladda aay xiligaasi isku badi gaartay gacan ka hadal.
Masar iyo Soomaaliya oo iskaashanaya
Wasaaradda Caafimaadka oo ka warbixisay sida loo qeybinayo Tallaalka Covid19, War-saxaafadeed
Jadwalka doorashada Soomaaliya oo markale dib u dhacay